Wararka - Farqiga u dhexeeya been abuurka iyo rogid
Been-abuurka ayaa baabi'in kara cilladaha sida tuur-tuuridda inta lagu guda jiro hawsha dhalaaleynta waxayna hagaajin kartaa dhismaha yar-yar. Isla mar ahaantaana, iyada oo ay ugu wacan tahay dhawridda dariiqa birta oo dhammaystiran, sifooyinka farsamo ee hilmaamku guud ahaan way ka roon yihiin kuwa wax lagu shubay. Qeybaha muhiimka ah ee mashiinnada la xiriira oo leh culeys aad u sarreeya iyo xaalado shaqo oo aad u daran, saamaxaadda inta badan waa la adeegsadaa marka laga reebo qaabab fudud oo la duubi karo, astaamo ama qaybo alxanka leh.
Been -abuurka waxaa loo qaybin karaa been -abuur bilaash ah, been -abuur been -abuur ah, iyo been -abuur ku -xidhan oo xidhan.
1. Been abuur bilaash ah. Adigoo adeegsanaya saamayn ama cadaadis si aad u beddesho biraha u dhexeeya anvils -ka sare iyo kan hoose (anvils) si aad u hesho cafiska loo baahan yahay, waxaa inta badan jira been -abuurka buug -gacmeedka iyo farsameynta farsamada.
2. Dhimasho been abuur ah. Been -abuurka dhinta wuxuu u qaybsan yahay been -abuurka dhinta ee furan iyo been -abuurka dhiman ee xidhan. Meesha bannaan ee birta ah waa la cadaadiyey oo waxay ku liidatay geerida been abuurka ah oo leh qaab gaar ah si loo helo gafafyo. Waxaa loo qaybin karaa cinwaan qabow, foorjari -rogid, been -abuur radial iyo soo -saarid, iwm Sug.
3. Sababtoo ah ma jirto wax iftiimaya been -abuurka dhiman iyo xanaaqa xiran, heerka isticmaalka maaddadu aad buu u sarreeyaa. Waxaa suurtogal ah in la dhammaystiro dhammaystirka cafiska adag hal hab ama dhowr hab -raac. Sababtoo ah ma jirto wax iftiimaya, aagga xoog-qaata ee been-abuurka ayaa la yareeyaa, culeyska loo baahan yahayna waa la dhimay. Si kastaba ha ahaatee, waa in la ogaadaa in meelaha bannaan aan si buuxda loo xadidi karin. Sababtan awgeed, mugga meelaha bannaan waa in si adag loo kontaroolaa, meesha qaraabada ee been -abuurka ayaa dhimata iyo cabbirka cafiska waa in la xakameeyaa, si loo yareeyo duugista geerida been abuurka ah.
Rolling waa habka cadaadiska cadaadiska kaas oo biraha birtu ku dhex maraan labo duub oo wareeg ah (qaabab kala duwan). Cadaadiska duubabka dartiis, isugeynta maaddada ayaa la dhimay oo dhererku waa kordhay. Kani waa habka wax -soo -saarka inta badan loo isticmaalo soo -saaridda birta. Soo saarista astaamaha, taargooyinka iyo tuubooyinka.
Marka la eego dhaqdhaqaaqa gabal -rogista, hababka duudduubku waxay u qaybsan yihiin: rogid dhaadheer, rogaal rogi, iyo rogaal rogaal.
Geeddi -socodka rogaal -celinta waa geeddi -socod biraha dhex mara laba duub oo u kala wareega dhinacyo iska soo horjeeda, iyo dheelitir caag ah ayaa ka dhex dhasha.
Is rogrogid: Jihada dhaqaaqaysa ee gabal duuban ka dib markii la qaloociyey waxay la jaanqaadaysaa jihada dhidibka duudduuban.
Skew rogid: Qaybta duudduubani waxay u socotaa si xawli ah, oo qaybta duudduuban iyo dhidibka duubku ma laha xagal gaar ah.
Waxay burburin kartaa qaab dhismeedka shubka ee birta birta ah, sifeeyo hadhuudhka birta, waxayna tirtirtaa cilladaha microstructure -ka, si qaab -dhismeedka birtu u cufan yahay oo guryaha farsamooyinka loo hagaajiyo.
Horumarkaani wuxuu inta badan ka muuqdaa jihada duudduuban, si biraha aysan mar dambe isotropic u ahayn ilaa xad; goobooyinka, dildilaaca iyo dabacsanaanta la sameeyay intii la shubay ayaa sidoo kale lagu alxan karaa iyadoo la adeegsanayo heerkulka sare iyo cadaadiska.
1. Ka dib marka la rogrogo, ka-soo-baxyada aan birta ahayn (badiyaa sulfides iyo oxides, iyo sidoo kale silica) gudaha birta ayaa lagu riixaa xaashiyo khafiif ah, oo delamination (interlayer) ayaa dhacda. Delamination waxay si weyn u sii xumaanaysaa sifooyinka gilgilashada birta ee jihada dhumucda, waxaana suurtogal ah in dillaacinta dhex -dhexaadintu dhici karto marka alxanka uu yaraado. Cadaadiska maxalliga ah ee ay sababtay yaraanshaha alxanka ayaa inta badan gaara dhowr jeer cadaadiska dhibicda dhalidda, taas oo aad uga weyn culeyska uu keenay rarku.
2. Walbahaarka hadhay oo ay sababtay qaboojin aan sinnayn. Cadaadiska haraaga ah waa isku-dheelitirka isku-dheelitirka gudaha oo aan lahayn awood dibadeed. Qaybaha birta kulul ee duuban ee qaybaha kala duwan ee kala-goysyadu waxay leeyihiin culaysyo hadhaa oo kale ah. Guud ahaan, marka uu weynaado cabbirka qaybta birta, waxaa sii weynaada cadaadiska haraaga ah. Inkasta oo walbahaarka hadhay uu yahay mid isku dheelitiran, haddana waxay weli saamayn gaar ah ku leedahay wax-qabadka xubinta birta ee hoos timaadda ficilka xoogga dibadda. Tusaale ahaan, waxaa laga yaabaa inay saamayn xun ku yeelato isbeddel, xasillooni, iska caabin daal, iwm.
3. Biraha bir-duubka kulul ma fududa in la xakameeyo marka la eego dhumucda iyo ballaca gees. Waxaan naqaannaa ballaarinta kuleylka iyo foosha. Tan iyo bilowgii, xitaa haddii dhererka iyo dhumucdu ay gaarsiisan yihiin heerka, waxaa jiri doona farqi taban oo gaar ah kadib qaboojinta ugu dambaysa. Kala duwanaanshaha taban ee ballaadhan, dhumucda dhumucda leh, ayaa si cad u muuqata waxqabadka. Sidaa darteed, birta cabbirka weyn, ballaca dhinaca, dhumucda, dhererka, xagal, iyo dhinac-birta ma noqon karto mid aad u sax ah.